December 2021 – Cele News TV
အခါခါျပန္ၾကည့္ခ်င္ရေလာက္ေအာင္ လူငယ္ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ မိမိုက္လန္းလြန္းေနတဲ့ ဆုအိမ့္စံ…
December 31, 2021 100million 0
အခါခါျပန္ၾကည့္ခ်င္ရေလာက္ေအာင္ လူငယ္ဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ေလးနဲ႔ မိမိုက္လန္းလြန္းေနတဲ့ ဆုအိမ့္စံ… ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ ေကာက္ေၾကာင္းအလွပိုင္ရွင္ေလး ဆုအိမ့္စံကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကိုအျပည့္အဝရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆုအိမ့္စံကို ပရိသတ္ေတြက ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေလးေတြနဲ႔စတင္ရင္းႏွီးခဲ့ၾကၿပီး သူမရဲ႕စြဲမက္ဖြယ္အလွပုံေလးေတြေၾကာင့္ အားလုံးၾကားမွာ ေရပန္းစားခဲ့တာပါ။ ဆုက ခႏၶာကိုယ္ ျပည့္ျပည့္ ေလးနဲ႔ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလးဆိုလည္း မမွားပါဘူးေနာ္။ အၿမဲတမ္း ခ်စ္စရာအၿပဳံးေလးေတြနဲ႔ အလန္းစားပုံရိပ္ေလးေတြက […]
မိန္းကေလးတိုင္း အားက်သြားရေလာက္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွတရားေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိ မိမိုက္ေနတဲ့ ေအးျမတ္သူ..
မိန္းကေလးတိုင္း အားက်သြားရေလာက္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွတရားေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိ မိမိုက္ေနတဲ့ ေအးျမတ္သူ.. The post မိန္းကေလးတိုင္း အားက်သြားရေလာက္တဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွတရားေတြနဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရွိ မိမိုက္ေနတဲ့ ေအးျမတ္သူ.. appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
တရားရုံးမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သရုပ်ဆောင် လူမင်းအား စီရင်ချက်ချလိုက်တဲ့အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ခင်စံပယ်ဦး
December 30, 2021 100million 0
ပရိသတ်ကြီးရေ လူမင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ် စဖြစ်ကတည်းက ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ အတူပါဝင် အားဖြည့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်စစ်စိုးရမှ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှ ာပဲ လူမင်းကို သူ့ရဲ့ နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ မနက်တွင် သရုပ်ဆောင် လူမင်းကို စီရင်ချက် ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် […]
ေထာင္ဒဏ္၃ႏွစ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနေပမယ့္ေထာင္ဒဏ္ ၆ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရတဲ့ မဝင္းမင္းသန္း…
ေထာင္ဒဏ္၃ႏွစ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနေပမယ့္ေထာင္ဒဏ္ ၆ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရတဲ့ မဝင္းမင္းသန္း… The post ေထာင္ဒဏ္၃ႏွစ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေနေပမယ့္ေထာင္ဒဏ္ ၆ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရတဲ့ မဝင္းမင္းသန္း… appeared first on Celebrity Corner. klcelenews
အသက်ငယ်တဲ့ယေ ာကျာ်းကိုရှရိပို င်ဆိုင်ထားရ ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ တကွထုပ်ဖေါ် ပြသ လာခဲ့တဲ့ မေထွဋ်ခေါင်
ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမထြဋ္ေခါင္ကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈေတြ မရွိေတာ့ဘဲမိသားစုကိုသာ အခ်ိန္ေပးျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္လို ကားရိုက္ကူးမႈေတြ မရွိေတာ့ေပမယ့္ ခ်စ္ရတဲ့ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေၾကာ္ျငာေလးေတြေတာ့ လက္ခံရိုက္ကူးေပးလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ အားလုံးကလည္း ေမထြဋ္ေခါင္ရဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို ၾကည့္ၿပီး ၾကည္ႏူးအားက်ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ့ ခင္ပြန္းကလည္း မ်က္စိေအာက္က […]
ပိုပိုနှင့် Beauty Blogger ဝင်း မင်းသန်းတေး သံရှင် စေ ာဖိုးခွာတို့ကိုထောင် ဒဏ်သုံးနှစ်စီချမှတ် စိတ်မ ကောင်းစရာ သတင်းဆိုး
ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့မှာတော့ အဖမ်းဆီး ခံထားရတဲ့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးကိုအလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ်စီချမှတ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ စစ်ကောင်စီဟာမော်ဒယ်သရုပ်ဆောင်ပိုင်တံခွန်ကိုအမိန့်ချပြီးတဲ့နောက်မှာ အခြားအထင်ကရအနုပညာရှင်တွေကိုလည်း အခုလိုမျိုး အမိန့်တွေတစ်ပုံစံတည်း ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတုန်းက အနုပညာရှင်တွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဦးလူမင်း၊ရဲတိုက်တို့ကို အမိန့်ချခဲ့ပြီး ညနေပိုင်းမှာတော့သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦး၊ အိနြ္ဒာကျော်ဇင် ၊ တေးသံရှင်စောဖိုးခွား၊ အဆိုတော်ပိုပိုနှင့် အလှဖန်တီးရှင်ဝင်းမင်းသန်းတို့ အားလုံးကို အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ဒဏ်၃နှစ်စီ အမိန့်တွေ ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အခုလို အနုပညာရှင်အားလုံးကိုအလောတကြီး ထောင်ဒဏ်တွေအမိန့်ချနေခဲ့တာ […]
အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ပြီး အတူတကွ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ၅၀၅(က) ဖြင့် အမှုစွဲဆိုခံရပြီး ဧပြီလပိုင်းလောက်မှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ […]
ဝက်ကိုလူသားတစ်ဦး လို ပင် စောင့် ရှောက်ခဲ့ တာ ကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေပန်းစား နေတဲ့ ဇနီး မောင်နှံ
လူတွေက ကြောင်နဲ့ ခွေးတွေ အများစုဘဲ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးမြူတက်ကြပေမဲ့ ယခုဖော်ပြမဲ့ဇနီးမောင်နှံက ဝက်ကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးမြူခဲ့ပါတယ် ။ မကြာသေးမီက ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ မစ္စ Nguyen Hong Trang ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ အထီးကျန်နေတဲ့ Ut Det ဆိုတဲ့ ဝက်ကို ကလေးငယ်တစ်ယောက်လို […]
အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သလို သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ စႏၵီျမင့္လြင္ကေတာ့ အခုဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္လို႔ေနၿ ပီပဲျဖစ္ ပါတ ယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သမီးေလးတစ္ေယာက္နဲ႔အတူတူ သာယာေအးခ်မ္းတဲ့မိသားစုဘဝကို တည္ေဆာက္ ထားတဲ့ စႏၵီျမင့္လြင္ဟာ သူမတို႔မိသားစုေလးရဲ့ ၾကည္ႏူးစရာအခိုက္အတံ့ေတြကို ပရိသတ္ေတြဆီ မၾကာခဏဆိုသလို ခ်ျပေလ့ရွိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထရက္ရွာေလးနဲ႔ မိသားစုအမွတ္တရဗီဒီယိုေတြကို အျမဲမၽွေဝေပးေလ့ရွိတဲ့ စႏၵီျမင့္လြင္ဟာ ဒီကေန႔မွာလည္း […]
ဦးတီနဲ့မအူဝဲ တို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးလုံးကို ထောင်ဒဏ် (၃)နှစ်စီချမှတ်ခံရ
ပရိသတ်ကြီးရေနွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာြ ပည်သူနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျ င်ကာလမ်းမပေါ်ထွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်လူမင်းနဲ့ရဲတိုက်ကိုဒီနေ့မှာထောင်တွင်းတရားရုံးကနေ စွပ်စွဲခံရတဲ့ပုဒ်မ မှာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်သုံးနှစ်ချမှတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ အာဏာသိမ် းဆန့်ကျင်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ၅၀၅-ကနဲ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်းတရားရုံးတွေမှာတရားရင်ဆိုင်နေခဲ့ရသူ တွေဖြစ်ပါတယ်။ရဲတိုက်ကိုစကစကဧပြီလမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူမင်းကိုတော့ မတ်လမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသ တင်းတေါကို ကြားကြားချင်းမှာပဲ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းမှညီအစ်ကိုမောင်နှမများနဲ့ ပရိတ်သတ်များက နှမြောတသဖြဟ်ပြီးများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကို လည်းတွေကရပါတယ်နော်.။klcelenews ပရိသတ်ကြီးရေနွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာြ ပည်သူနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်ကာလမ်းမပေါ်ထွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့သရုပ်ဆောင်လူမင်းနဲ့ရဲတိုက်ကိုဒီနေ့မှာထောင်တွင်းတရားရုံးကနေ စွပ်စွဲခံရတဲ့ပုဒ်မမှာအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်သုံးနှစ်ချမှတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သူတို့ […]